Vakinankaratra : « feno ny kapoaka … » (+vidéos) | Site officiel du collectif GTT Gasy Tia Tanindrazana
Vakinankaratra : « feno ny kapoaka … » (+vidéos)
Tafitohina tanteraka tamin’ny fihetsiky ny lehiben’ny faritra sy ny lehiben’ny distrikan’Antsirabe voalohany ny mpandala ny ara-dalàna ao amin’ny Faritra Vakinankaratra. Na dia efa nanome toky ny hamela azy ireo handray anjara tamin’ny matso manko ireto manam-pahefana ireto dia nitsipaka izany tamin’ny ora farany ary nampiasa hery famoretana hampihorohoroana ny vahoaka mihitsy. Taorian’izany ary dia nanapa-kevitra ny nihazo ny Magro Avaratsena avy hatrany ireto mpiara-dia amin’ny ara-dalàna ireto ary nankalaza ny fahatsiarovana ny fahaleovantena tamin’ny fombany izy ireo.
26 Jiona 2012 - Magro Avaratsena Antsirabe
Raha ny sitrapon’ireo mpandrindra sy ny vahoaka dia nitroatra avy hatrany izy ireo saingy ny tendrim-po hono tsy mba namana ary tsy azo atao ny manome vahana ny mpanongam-panjakana hiampanga ny zanak’i Dada amin’izao ankatoky ny fihaonan’ny Filoha RAVALOMANANA amin’i tgv izao.
Mikasika ity fihaonana ity indrindra dia nazavain’ny lehiben’ny delegasiona nanoloana ireto vahoaka vory lanona teo amin’ny Magro fa tsy ho ela intsony izany fihaonana izany ary mbola mitaky ny hanaovana izany eto Madagasikara hatrany ny vahoaka Malagasy sy ny delegasioan iray manontolo. Nomarihiny koa anefa fa « na aiza na aiza hanaovana ny fihaonana dia ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA hatrany no tanjona fototra ». Nanterin’ny lehiben’ny delegasiona avy amin’ny Ankolafy RAVALOMANANA ihany koa fa hamafisina amin’izany fotoana hihaonan’ny roa tonta izany ny fametrahana ny fitoniana mba ahafahana mampijoro ny fiaraha-mitantana marina. Izany hoe fangatahana tsy mivaona amin’ny tondro zotra izay efa niarahana nanao sonia no takian’ny mpandala ny ara-dalàna fa tsy sanatria filam-boa tsy ary araka ny filazan’ny mpanara-dia ny mpanongam-panjakana sanatria.